I-Tokyo iphakamisa izithintelo kwindawo yokutyela njengoko iimeko ezintsha ze-COVID-19 zingena
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJapan eziQhekezayo » I-Tokyo iphakamisa izithintelo kwindawo yokutyela njengoko iimeko ezintsha ze-COVID-19 zingena
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Culinary • inkcubeko • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Iindaba zaseJapan eziQhekezayo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Shopping • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iiwayini kunye neMimoya
I-Tokyo iphakamisa izithintelo kwindawo yokutyela njengoko iimeko ezintsha ze-COVID-19 zingena.
E-Tokyo, malunga ne-102,000 yokutya eqinisekisiweyo njengemfuneko yokulwa ne-COVID-19 amanyathelo awasayi kuphinda axhomekeke kwisicelo sokuyeka ukuhambisa utywala nge-8: 00 pm ixesha lendawo.
Inani lamatyala amatsha aqinisekisiweyo e-coronavirus lehle kakhulu kulo lonke elaseJapan.
Ikomkhulu laseTokyo liqinisekise kuphela iimeko ezili-19 ezintsha zosulelo lwe-COVID-19 ngeCawa.
Izithintelo kwiivenkile zokutyela zaphakanyiswa eTokyo kwaye zajikelezwa zizithili okokuqala kwiinyanga ezili-11.
Njengokuqinisekiswa kwemihla ngemihla amatyala e-COVID-19 ehle kakhulu kulo lonke elaseJapan ngeCawa, iTokyo, iKanagawa, iSaitama, iChiba kunye ne-Osaka iphakamise izithintelo ze-COVID-19 kwiindawo zokutyela namhlanje.
Izithintelo zokusetyenziswa kotywala kunye neeyure zokusebenza kwiivenkile zokutyela kwikomkhulu kunye ne-Osaka zanyuswa okokuqala kwiinyanga ezili-11, kulandela imeko eqhubekayo yokuhla kusulelo kulo lonke elaseJapan.
Imihla ngemihla iqinisekisile iimeko ze-COVID-19 zehlile zaya kwi-236 kwilizwe lonke izolo, xa kuthelekiswa ngaphezulu kwama-25,000 axeliweyo phakathi ku-Agasti, ngexesha lomjikelo wesihlanu wosulelo.
UTokyo uqinisekisile usulelo lwemihla ngemihla eli-19 ngeCawa, elona lincinci ukusukela nge-17 kaJuni kulo nyaka uphelileyo.
E-Tokyo, malunga ne-102,000 yokutya eqinisekisiweyo njengemfuneko yokulwa ne-COVID-19 amanyathelo awasayi kuphinda axhomekeke kwisicelo sokuyeka ukuhambisa utywala nge-8: 00 pm ixesha lendawo. Nangona kunjalo, malunga ne-18,000 yeendawo zokutyela ezingaqinisekanga ziya kufuneka ziqhubeke nokulandela izithintelo zakudala kwaye kufuneka ziyeke ukukhonza nge-9: 00 ebusuku ngexesha lasekhaya.
Ukongeza, zonke iindawo zokutya ziya kucelwa ukuba zinciphise ubungakanani beqela kubantu abane kwitafile nganye, kwaye kumaqela amakhulu, ubungqina bogonyo luya kufuneka.
Urhulumente wedolophu yaseTokyo uthe uzakubethelela amanyathelo okulwa ne-COVID-19 ukuphela kukaNovemba ukukhuthaza ukubuyiswa kwemisebenzi yezentlalo nezoqoqosho ngelixa kuthintelwa ukuphinda kusuleleke.